U diyaari darajo / daqiiqo / ilbiriqsi ah jajab tobanle - Jofumed
Febraayo, 2010 Cartografia, Downloads, Google Earth / Maps
Waqtigaan ka hor waxaan weydiistay tan, tan iyo markii saaxiibka u eg yahay a dhaqso yar oo maanta waa maalin lagu dabaaldego waxyaabo badan, halkan waa qalab kuu oggolaanaya inaad beddesho isuduwayaasha juqraafi, shahaadooyinka jajab tobanle.
Waa maxay sababta miiska isdhaafsiga
Waa wax caadi ah in la helo isku-duwayaasha kuwaas oo ku jira darajada, daqiiqadaha, daqiiqadaha, tusaale ahaan:
N waxa loola jeedaa in ay tahay darajada 75 oo ka sarreeya qorraxda, haddii ay S tahay mid macnaheedu yahay in uu yahay koofurta koonfureed. Xaaladda dhererka, waxay yeelan doonaan E ama W, hadba waxay ku xiran tahay inay yihiin bari ama galbeed oo ka mid ah Meridian
Barnaamijyada sida Google Earth iyo ArcGIS waxay u baahan yihiin in ay ku jiraan qaabka tobanle, sida:
Xaqiiqada, haddii ay ka hoosaysa qulqulatadu waxay noqonaysaa mid xun, isla sidaasna waxay ku dhici doontaa dhererka, taas oo noqon karta mid xun oo u dhexeeya galbeedka. Waxaan kugula talin lahaa in aan fahmo, waxoogaa ku ciyaaro Google Earth, bedelida fursadaha bandhigyada UTM, juquraafi, leh iyo aan lahayn jajab tobanle.
Sida miisku u shaqeeyo si loogu bedelo isuduwayaasha juqraafi, shahaadooyinka jajab tobanle
Had iyo jeer isticmaal miiska Gabriel Ortiz, kaas oo loogu talagalay beddelidda isku-duwidda juquraafi ilaa UTM, oo muujinaya tiir ay ku jiraan qaabka tobanle.
Waxaad dooran kartaa fooriyada sare ee faanjiga sare.
Taariiqda jaalaha ah, waa inay galaan xogta, sanduuqa kowaad wuxuu aqbalaa lambarka aqoonsiga dhibicda.
Xagga midigta mid kasta waa midabkiisu iyo dherer ahaanba qaabka jajab tobanle, iyada oo aan la isku dhejinayn, calaamad diimeed oo isbarbar dhigo.
Qaybta liinta ayaa ku jira xogta la isku daray, oo leh lambarka dhibicda, raaxada iyo dhererka.
Cinwaanka qaybtan, waxaad ku geli kartaa tirada jajab tobanlaha ah ee aan rajeyneyno in ay soo afjaraan isku dhafka. Daryeelka, in wareega jajab tobanle ee isku-duwaha juqraafi waxay horseedi karaan qalad weyn.
U dir iskudhacyada si aad uhesho
Si aad u soo dirto faylka txt, kaliya u fur faylka cusub, nuqulka xogta ka soo baxa liiska xargaha oo ku dheji halkaas.
Kadib markaa faylkan waxaa laga dhigi karaa Google Earth, oo tilmaamaya amarka, sida Waxaan u sharaxay boostadaas.
Dabcan, Datum waa inuu ku jiraa WGS84 si aanay u dhicin meelo kale. Xagliyada ayaa had iyo jeer loo tagay si loogu badalo UTM iyo iskudubarid for AutoCAD, sida ay ahayd asalka asalka ah ee jadwalkan.
Soo-dejinta waxay u baahan tahay qayb ka mid ah lacag-bixinta asaasiga ah, kaas oo aad sameyn kartid oo leh Paypal ama credit card.
Post Previous«Previous 120 sano ee Juquraafi Qaran
Post Next Halkee ayaa isticmaala Manifold GIS?Next »
20 Jawaab in "Ku beddelaan darajooyinka / daqiiqo / ilbiriqsi si jajab tobanle"
anigana sidoo kale
Fasal kastaa wuxuu leeyahay daqiiqadaha 60 iyo daqiiqad kasta 60 sekan. Waxa dhaca waa in markii lagu calaamadeeyay khariiddada ama goorta, waxaa kaliya lagu sameeyaa meel fog si aysan u buuxin buundada.
Raúl Navarro isagu wuxuu leeyahay:
Hola que tal? Waxaan ahay in yar oo qasan la mid ah degrees, daqiiqo iyo seconds in juqraafiga loo arko in kasta suusho degrees 15 cabbiro iyo shahaado kasta sidaas qiyaasay daqiiqo 4, sida ay suurtagal tahay markaa waa in 1 60 daqiiqo qiyaas heerka? ama tallaabooyin ama tallaabooyin 4 60, waa sida in? Waxaan rajeynayaa in qof ii jawaabi karo
Waad ku mahadsantahay badanaa iyo salaan
Mid ka mid ah shahaadada ayaa leh 60 daqiiqado, laakiin kiiskan ma heleysid daqiiqado.
Laakiin sidoo kale fasal kasta wuxuu leeyahay ilbiriqsiyo 3,600 (60 daqiiqo oo loogu talagalay 60 sekan). Marka sekadahaaga 15 waxay u dhigmaan:
Kadib waxay noqon laheyd darajo 75.004166 qaab qaab jajab tobanle ah.
Aynu soo qaadno tusaale kale oo leh darajo, daqiiqo, iyo daqiiqado.
Saacadaha: 14, oo u dhigma 14 / 60 = 0.23333
Tirooyinka: 57 / 3600, oo u dhiganta shahaadada 0.0158333.
Soo koobiddu waxay noqon doontaa shahaadada 75.249166.
giiseell :) isagu wuxuu leeyahay:
si fiican, wax aanan u baahnayn inaan ogaado sida loo gudbiyo 75 ° 15 "si ay u qiimeeyaan, lafta ilaa tobanle, caawi fadlan
Jihada dib u jimicsiga layligan (Fasalada tobanlaha ilaa heerka, daqiiqadaha iyo darajooyinka) ayaa ku jira maqaalkan.
Waad ku mahadsan tahay faahfaahinta, hubaal qof ayaa ka faa'iideysan kara.
QUINDIANO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan go'aansaday inaan diro koodhka:
Shaqeynta GMS (GradosDecimal)
hoose = Heerarka tobanaad
g = Int (az): m = Int ((az - g) * 60): s = Round (3600 * (az - g - m / 60), 0): Haddii s> = 60 Markaas s = 0: m = m + 1
Haddii m = = 60 Markaas m = 0: g = g + 1
Haddii g> = 360 ka dibna g = 0
U dir boostada editor@geofumadas.com
iyo ka dib marka dib loo eego waxaan ku fidin doonaa.
Waxaan sameeyey faleebo Excel ah oo hawshiisu tahay inuu bedelo darajo darajo darajo ah ilaa gundhigga 2aad ee daqiiqadda
3.15218 = 3 ° 09'7.85 ", laakiin ma aqaan sida loo gudbiyo golaha. Qofka iga caawiya fadlan.
Andres Humeres isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa miis si loogu badalo UTM PSAD56 illaa heerka, toban daqiiqo
yazmin isagu wuxuu leeyahay:
Nu ma kuugu mahad naqayaa, waayo auda nu waxba ma oga, laakiin graxiias
Waad ku mahadsan tihiin !! Ma garanaysid inta uu lumay, hahaha, saludooo !!!!!!!!!
Marka hore, marka hore
Darajada 1 waxay leedahay 60 daqiiqo, hal daqiiqo 60.
Waxay kala qaybsanyihiin 4,750 inta u dhaxaysa 60 si aad u ogaatid inta digrii ah, taas oo siinaysa 79.16
Kadibna, waxaad lahaan lahayd shahaadada 1 (ee daqiiqadaha 60) laakiin daqiiqada 19 labadaba waxay ku daraan darajooyinka 79.
Isugeynta imisa ilbiriqsi ayaa ku jira daqiiqadaha 79 xiran, waxaan haysan laheyn 79 × 60 = 4,740. Taas oo macnaheedu yahay inaad weli harsan tahay 10 ilbiriqsi oo soo haray si aad u gaarto 4,750
Darajada 1, daqiiqado 19, daqiiqo 10
Waxaan u baahanahay inaad iiga sheegto mudnaanta koowaad si aad u muujiso darajooyinka, daqiiqadaha iyo daqiiqadaha: ilbiriqyada 4750. Ma haysto fikrad yar
vanne isagu wuxuu leeyahay:
Waan fahmi waayay
sarahy isagu wuxuu leeyahay:
doofaarka ha u gelin waxyaabo ay u adeegaan bakeeriga doofaarka saafiga ah
Epa! Waa maxay xiriir weyn. Waad ku mahadsantahay, wax badan ayaa halkaa laga arki karaa.
Waxaad u adeegsan kartaa «U beddelashada faylka GPS qoraal qoraal cad ama GPX» websaydhka http://www.gpsvisualizer.com waxayna u beddeshaa qodobada galka GPX oo u geeyaa GE ama Global Mapper iyo meeshii laga rabo qaabka aad u baahan tahay.
Salaan ka soo Argentina iyo maalin kasta oo aan eego blogka waa mid aad u xiiso badan.